साैतेनी आमाकाे मार्मिक कथा – www.agnijwala.com
साैतेनी आमाकाे मार्मिक कथा
एकजना मानिस शहरमा बस्थ्यो। केही समयपछि उनकी श्रीमतीको मृत्यु भयो। उनको केटीको नाम टम थियो। एक दिन उसले अर्को बिहे गर्यो। उनकी सौतेनी आमाले केटीलाई माया गरिनन। केटी दिनभर काम गरिसकेपछि सुत्थी। सौतेनी आमाकी एउटी छोरी पनि थिई, जसको नाम काम थियो।
केही दिन पछि उसको बुबाको मृत्यु भयो। टम नामकी केटीको दुर्दशा हुन थाले। यद्यपि बुबाको ठूलो भवन थियो, तर केटी सानो कोठामा बस्छिन्, उनी अन्य कोठामा समेत पस्न सक्दिनथिन। उनी घरका सबै काम पनि गर्थिन।
उनी सबै काम गर्दा पछि कमजोर भइन् तर कसैलाई केही भनेन।
एक दिन सौतेली आमाले उसलाई काठ लिन वन पठाए। उसले सोची – “यदि उतै ब्वाँसो खाएको भए यस्तो राम्रो हुने थियो।” तर तेसाे भएन। सौतेनी आमाको डाहकाे एउटै कारण यो थियो कि टम नामकी केटी सुन्दर थिइन।
एक दिन सौतेली आमाले उसलाई भनी – “गाउँको पोखरीबाट माछा लिएर आऊ। जसले धेरै माछा नलाउनेले रातमा खाना पाउँदैन। “टम नामकी केटीले सोचिन् -” यो नियम मलाई मात्र लागु हुन्छ। “उनले बिहानदेखि बेलुका साँझसम्म आफ्नो टोकरी माछाले भरिन्। भरिएको टोकरी देखेर, काम भनिने केटीले भनि “हे बहिनी! तिम्रो अनुहार धूलो छ, तिमी यस तालमा नुहाउ “टम नुहाउन गएको बेला, कामले आफ्नो टोकरीमा माछाले भरि घरतिर लागी।
टम शोकमा पर्दै बिलाप गर्न थाली । केही समय पछि एक जलपरी पोखरी तालबाट बाहिर आईन, उनले विलापको कारण सोधीन। केटीले सम्पूर्ण कथा सुनाई।जलपरीले भनिन् – “हे छोरी! शोक नगर, मैले तिम्रो टोकरीमा सुनको माछा राखेको छु। ति आफ्नो घर नजिकको इनारमा राख्नुभयो। उनले तपाईको दिमागलाई इच्छुक बनाउँछिन्। “उनले त्यसो गरिन्। त्यो माछा दिनहुँ उनिसंग कुरा गर्थ्यो। सौतेनी आमाले शंका गरी। उसले एक दिन टम बाहिर पठाइ।
सौतेनी आमाले माछालाई इनार बाहिर लगे र खाइन्। साँझमा टम इनार नजिक आइ र माछालाई बोलाइ तर त्यहाँ कुनै उत्तर थिएन। उनी करुणको शोक गर्न थालिन्, तब जलाप्रीले भनिन् – “शोक नगर, आफ्नो कोठामा माछाको हड्डीहरू गाऊ।” टम नामकी एउटी केटीले पनि त्यसै गरिन्। त्यो समयमा उनले एउटी राम्री छोरी पाए।
दोस्रो दिन उत्सव थियो। सौतेनी आमाले चामल र चना मिसाइन् र टोम नामकी केटीलाई भनिन्, “तपाईले चामललाई यी चामलबाट अलग गर्नुहोस्।” यो भन्दै, सौतेनी आमा आफ्नो छोरीसँगै मेला हेर्न गइन्। आँसुहरू बगिरहे, ती केटीले सोधिन्, “म कसरी साडी लगाएर मेलामा जान्छु?” उहि समयमा, हजारौं केटीहरू त्यहाँ आईन्। एकै क्षणमा, चना धानबाट अलग गरियो। उनी चाँडै साडी र राजकुमारी जस्तो जुत्ता लगाएर मेलामा पुगे। उनको आइरहेको देखेर कामा नामकी केटीले उनकी आमाको कानमा भनिन् – “यो केटी जो राजकुमारी जस्तो देखिन्छ, के यो टम हो?”
सौतेनी आमालाई देखेर, टोम नामकी केटी डरले भाग्न थालिन्।
उसको एउटा जुत्ता त्यहाँ खस्यो। एक राजपूत त्यो जुत्ता देखेर मोहित भए र सैनिकहरूलाई आदेश दिए – “कुमारीलाई राजभवनमा ल्याऊ।” सिपाहीहरूलाई खोज्नुहोस् र उसलाई त्यहाँ लैजानुहोस्। सुन्दर केटीलाई देखेर राजाले उनको रानी बनाई। यो देखेर, सौतेनी आमा एकदमै दुःखी भइन्। एक दिन, टम बुबाको श्रद्धा मा आफ्नो बुबाको घरमा आए। खुसी सौतेनी आमाले माथिबाट भने – “रूखबाट नरिवलको फल तोड्नुहोस् र बिन्तीकर्ताहरूलाई दिनुहोस्।”
जब उनी रूखमा चढिन्, सौतेली आमाले रूख काटेर आफैं राजालाई बोलाइन् – “हाई! मेरी छोरी नरिवलको रूखबाट खसेर मरिन्। ”
एक वृद्ध महिलाले खसेको केटीलाई आफ्नो घरमा लिएर आईन् र उनको उपचार गरिन्। केही दिन पछि ऊ निको भयो। यहाँ सौतेनी आमाले आफ्नी छोरीलाई दरबारमा लगे र राजालाई भनिन – “मेरी छोरीलाई रानी बनाऊ।” राजाले उनको अनुरोधलाई माने।
एक दिन राजा शिकार गर्न वनमा गए र जताततै अँध्यारो थियो। उही जंगलमा कतै उनले आगोको जलिरहेको दियो देखे। धेरै पछि उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो। राजाले भने – “म यहाँ राती आराम गर्न चाहन्छु।” ती वृद्ध महिलाले राजालाई स्वागत गरिन्। त्यहाँ तामलाई देखेर राजा छक्क परे र उनी पनि खुसी भए। रानीको मुखबाट सौतेली आमाले बनाएको सम्पूर्ण घटना सुनेपछि राजा क्रोधित भए र सिपाहीहरूलाई रानीकी सौतेनी आमा र छोरीलाई जेलमा हाल्न आदेश दिए। झ्यालखानामा रहेका सौतेनी आमाले सोधिन् – “परमेश्वरको मन्दिरमा ढिला भइसक्यो, त्यहाँ अन्धकार हुँदैन।”